သဘာဝအားအင်: ထူးခြားဆန်းပြား သခွားသီးလေးများ (၂)
by ပိုပိုဇော်(သဘာဝအားအင်)August 23, 2013 at 6:15pm
တစ်ကိုယ်ရည်လှပမှုအတွက် သခွားသီး၏ အကျိုးကျေးဇူးများ။
သခွားသီးဟာ အသားအရည်အတွက် အကောင်းဆုံးအဖော်မွန်ပါဘဲ။ မျက်နှာအသားအရေကို သန့် စင်ခြင်း၊ အေးမြစေခြင်း၊ ချောမွေ့ စေခြင်းနှင့်အသား အရေပြားကို တင်းရင်းသိပ်သည်းကောင်းမွန်စေခြင်း တို့ အတွက် များစွာအကျိုးရှိပါတယ်။ ထို့ ပြင် မျက်နှာပေါ်ရှိ အရေးကြောင်းများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
1. အသားအရည် တောက်ပစိုပြည်စေရန်အတွက် အထူးတလည်လုပ်စရာမလိုပါ။ သခွားသီးကိုသာ မှန်မှန်ကိုက် စားပေးပါ။
2. မျက်နှာပေါ်ရှိ အမည်းစက်များ၊ ၀က်ခြံ၊ အပူလောင်ခြင်း နှင့်အရေပြားရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ အတွက် သခွားသီး သတ္တုရည်ကို သံလွင်ဆီဖြင့် ရောလိမ်းပေးခြင်းဖြင့် သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
3. သခွားရည်သည် အသားအရေကို အေးမြစေပါတယ်။ ထို့ ကြောင့် နေပူလောင်ဒဏ်ရာများကို သခွားရည်ဖြင့် သုတ်လိမ်းပေးပါက၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ အပူရှိန်ကို သခွားရည်ကစုပ်ယူပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သခွားသီး ကို စက်ဖြင့်အရည်ဖျော်ရန် အဆင်မပြေပါက၊ အသီးကိုခပ်ပါးပါးလှီးကာ ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားကို ပွတ်တိုက်ပေး ပါ။
4. သခွားသီးထဲရှိ စီလီကာအစွမ်းက ခြေသည်း/လက်သည်းခွံများ ကွဲခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းကို ကောင်းစွာကုသပေးနိုင် ပါတယ်။
5. သခွားသီးတွင် စီလီကွန် နှင့် ဆာလ်ဖာတို့ မြင့်မားစွာပါရှိခြင်းကြောင့် ဆံပင်ကို အရှည်မြန်စေပါသည်။ သခွားသီး အရည် ကို မုန်လာဥနီအရည် (သို့ မဟုတ်) ဆလတ်ရွက်အရည် (သို့ မဟုတ်) ကိုက်လံအရွက် အရည် တို့ ဖြင့် ရောစပ်ကာ ဆံသား နှင့်ဦးရေပြားကို လိမ်းပေးပါက၊ ပို၍အစွမ်းထက်မြက်စေပါတယ်။
6. မျက်လုံးများ မို့ မောက်အစ်ထွက်ရောင်ရမ်းသူများ၊ မျက်ကွင်းညိုသူများ၊ မျက်စေ့နာသူများ၊ ကွန်ပြူတာ အချိန် ကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုထားရသဖြင့် မျက်စေ့ညောင်းသူများသည် သခွားသီးကို ခပ်ပါးပါးလှီးကာ မျက်ခွံ နှင့် မျက်လုံးအောက်ခြေတ၀ိုက် ၁၅ မိနစ်ခန့် ကပ်ထားပေးရုံမျှဖြင့် သခွားသီး၏ အေးမြမှုကြောင့် သက်သာပျောက် ကင်းစေပါတယ်။
ထို့ ပြင် သခွားသီးတွင် ဗီတာမင် A ပါရှိ သောကြောင့် အမြင်အာရုံကို တိုးတက်ကောင်းမွန် စေပါတယ်။
အချို့ သောသူများသည် သခွားသီးနှင့်မွေးရာပါဓာတ်မတည့်သူများရှိတတ်၍
(ခ)အစာမ ကျေခြင်း နှင့်
(ဂ)ယားယံခြင်းတို့ဖြစ်တတ်သောကြောင့် အလွန်အကျွံမစားသင့်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ လတ်ဆတ်သောသခွားသီး၏ အရောင်မှာ အစိမ်းရောင်တောက်တောက်ဖြစ်ကာ၊ မာတင်းနေပါတယ်။ အ၀ါရောင် သန်းနေသောအသီးတို့ သည် လတ်ဆတ်ခြင်းမရှိဘဲ အတွင်းထဲရှိအစေ့များလဲ ရင့်မှည့်ကာ အာဟာရမဖြစ်စေပါဘူး။
သခွားသီး၏ သူမတူအောင်ဆေးဘက်ဝင်ပုံကို အထက်ပါအတိုင်းသိရှိရပါပြီ။ ထို့ ကြောင် ထူးခြားဖွယ် ဘက်စုံကောင်းမွန်သော သခွားသီးကို ကျန်းမာရေးအထောက် အကူပြု အသီးအနှံတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုကြပါရန် အကြံပြုတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ဘာသာပြန်သူ - ပေါက်ပေါက်
(ကိုးကားချက် - The Amazing Cucumber by Vibhavari)
Posted by ပိုပိုဇော် at 11:16